သူ့အပေါ် မ+ကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိအောင် ခန့်စည်သူ ဒဲ့ ပြန်ပြောပြီ - Lucky9
Lucky9News & Media
သူ့အပေါ် မ+ကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိအောင် ခန့်စည်သူ ဒဲ့ ပြန်ပြောပြီ
by Lucky 9
Written by Lucky 9
မဂ္လာပါ ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ
ဥကၠဌႀကီး ခန္႔စည္သူက အားလုံးသိေအာင္ ေျပာၿပီ
ရန္ကုန္ ဇြန္ (၆) ရက္ ႏို င္ငံေတာ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္ စီ လက္ ထက္ ပထမ ဆုံး အႀကိမ္ ႐ုပ္႐ုင္ အစည္း အ႐ုံး ဥကၠ ဌ အျဖစ္ တာဝန္ ေပးျခင္းခံ လိုက္ ရ သည့္
႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခန္႔စည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏုပညာ အတိုင္း အဝန္း အခ်ိဳ႕နဲ႔ ၎အား အားေပးေနသည့္
ပရိတ္သတ္အခ်ိဳ႕တို႔အၾကားလူမႈကြန္ရက္စာမ်ာနာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌသစ္ ကိုခန္႔စည္သူ၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအား ေကာက္ႏုတ္တင္ျပ လိုက္ ရပါသည္ ခု ခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေဝဖန္ ေနၾက မယ္ဆို တာ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳတြက္ၿပီးထားပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလာကအတိုင္းအဝန္းေတြ ကေရာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်စ္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကေရာေပါ့ဗ်ာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာမယ္
တာဝန္ဆိုတာ ယူခ်င္မွလည္း ရခ်င္မွရတာ ရခ်င္ေသာ္လည္း ေပးခ်င္မွ ေပးတာမ်ိဳးေလဗ်ာဆိုေတာ့ဘယ္လိုပဲ ေျပာၾကပါေစဗ်ာ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽမ္းတဲ့အႏုပညာ ကြၽန္ေတာ္က်င္လည္ေနတဲ့ေလာကထဲကထဲမွာ ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ျပခ်င္တယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္းဗ်ာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ပဲ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ မကြၽမ္းက်င္တဲ့ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ဝင္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္ကိုခက္ခဲလြန္းပါတယ္ႏိုင္ငံေရးသမားက ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို
သူငယ္စဥ္ကတည္းက အသက္ေမြးဝမ္းျပဳခဲ့တလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက အႏုပညာပိုးေတြပါလာလို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္ေနၾကတာပဲေလဗ်ာ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္အႏုပညာလုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္သြားမယ္
အႏုပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ ေမြး ထုတ္သြားမယ္CDMနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လုပ္တာနဲ႔ မလုပ္တာ ဘာကြာသြား လဲဆိုေတာ့အိပ္ရတာနဲ႔အိပ္ယာပုံစံအိပ္ေပ်ာ္တာနဲ႔အိပ္ မေပ်ာ္တာကြာသြားတာေပါ့ဗ်ာ(ရယ္လ်က္) တစ္ခုရွိတယ္ဗ် အႏုပညာရွင္သမားေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္ကေငြရမဲ့လမ္းေၾကာင္းဆို အရမ္းလိုက္တယ္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္
လမ္းေပၚထြက္ ဒါေလးလုပ္ေပးပါလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဇာတ္ေကာင္းေပါင္းဘယ္ ေလာက္႐ိုက္မွ ရတယ္ဆိုတဲ့ ေငြအေမာက္ ကို သူတို႔ေကာင္းေကာင္းသိတလို အျခားတစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ အႏုပညာ ရွင္ အခ်င္းခ်င္း လည္း သိ တယ္ ခု ႏိုင္ငံေတာ္လူႀကီးေတြ ပိုသိမွာေပါ့ကိုခန္႔စည္သူရဲ႕ Video မွတ္တမ္းေလး. ဆင္ဆာ မေပးပါ သျဖင့္ နားလည္ ေပးေစ ခ်င္ ပါ တယ္
ေျပာသြားတာေလး သေဘာက်လို႔ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ Crd အခုလိုဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ျခင္းစီတိုင္းက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာေန႔ရက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ c r d
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ် ကြီးရေ
ဥက္ကဌကြီး ခန့်စည်သူက အားလုံးသိအောင် ပြောပြီ
ရန်ကုန် ဇွန် (၆) ရက် နို င်ငံတော် စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီ လက် ထက် ပထမ ဆုံး အကြိမ် ရုပ်ရုင် အစည်း အရုံး ဥက္က ဌ အဖြစ် တာဝန် ပေးခြင်းခံ လိုက် ရ သည့်
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ အနုပညာ အတိုင်း အဝန်း အချို့နဲ့ ၎င်းအား အားပေးနေသည့်
ပရိတ်သတ်အချို့တို့အကြားလူမှုကွန်ရက်စာမျာနာများပေါ်တွင် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိသည် ကို တွေ့နေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ကိုခန့်စည်သူ၏သဘောထားမှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြ လိုက် ရပါသည် ခု ချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကို ဝေဖန် နေကြ မယ်ဆို တာ ကျွန်တော် ကြိုတွက်ပြီးထားပါ ကျွန်တော်တို့ လောကအတိုင်းအဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကရောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ပြောမယ်
တာဝန်ဆိုတာ ယူချင်မှလည်း ရချင်မှရတာ ရချင်သော်လည်း ပေးချင်မှ ပေးတာမျိုးလေဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေဗျာ ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည်နေတဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြချင်တယ် ကျွန်တော်လည်းဗျာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုခက်ခဲလွန်းပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးလောကထဲကို
သူငယ်စဉ်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းပြုခဲ့တလို ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာပိုးတွေပါလာလို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေကြတာပဲလေဗျာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ်
အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မွေး ထုတ်သွားမယ်CDMနဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့ မလုပ်တာ ဘာကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော်တာကွာသွားတာပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်) တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အနုပညာရှင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်
လမ်းပေါ်ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ် လောက်ရိုက်မှ ရတယ်ဆိုတဲ့ ငွေအမောက် ကို သူတို့ကောင်းကောင်းသိတလို အခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှင် အချင်းချင်း လည်း သိ တယ် ခု နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေ ပိုသိမှာပေါ့ကိုခန့်စည်သူရဲ့ Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာ မပေးပါ သဖြင့် နားလည် ပေးစေ ချင် ပါ တယ်
ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Crd အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ c r d
သူရဲကောင်းကြယ်စင်ငယ်စဉ်က အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကို လှူဖို့အတွက် သူရဲ့အသစ်စက်စက်အဝတ်အစားတွေကို LIVEလွှင့်ပြီး ရောင်းချခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ဗီဒီယို
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ၂လပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာဖြစ်သူလူရွှင် တော်ဇာဂနာကို ယနေ့အချိန်ထိတစ်ရက်မှမေ့မ ရသေး ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ငှက်ပျောကြော်
ခန့်စည်သူ ဖက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ ဆဲ ချင် လောက်တဲ့ စကား ပြောလိုက်တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်….
“နောင်တ မရှိတဲ့ ခရီးကြမ်းကို ချီတက်လာတာ (၄) လ ပြည့်ပြီ” လို့ မိတ်ကပ်မေဦး ပြောပီ
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမှုအခြေအနေ
မပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့တွေမှာ အရင်ကပျော်ခဲ့တဲ့အမှတ် တ ရ တွေကိုပြန်တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အ ကြော င်း ပြောလာတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
သူမရဲ့ အသက်အရွယ်ကို သိသွားတဲ့သူတိုင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်စေခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်မလေး
beeg com sobazo.com bengali hardcore sex swati naidu hot images xshaker.net gujrati girl nude photo owner of jabong go-indian.pro wwww xxxx com video sex moovies rajwap.pro omegal sex chat mallu aunty topless kashtanka.tv bf film nepali mayaratixxx pornolaba.mobi xnxx page3sax xxx www kashtanka.mobi karnataka school sex anasuya nude gif hotindianporn.mobi watch free porn videos vtrahevip redwap2.com indian bf movies mallu sex story anybunny.tv six hinde video flex printing sobazo.com i5 processor girl boy saxy image hindipornvideos.info hd hindi porn indian femdom videos freeindianporn2.com naked college girls pics indian bf desi xxxlib.mobi gavti sexy desi hindi xvideo onlyindian.net sexvdio sex.video anybunny.pro richa pallod sex video